Saturday September 22, 2018 - 11:48:20 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa markale guluf dagaaleed ku qaaday magaalada istiraatiijiga ah ee Qoryooleey.
Wararka ka imaanaya Sh/Hoose ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo aad u xooggan ay xalay saqdii dhexe ka bilaawdeen gudaha magaalada Qoryooleey halkaas oo ay difaacyo ku lahaayeen maleeshiyaadka DF-ka.
Dagaallada ayaa yimid kadib markii ciidamada Al Shabaab ay dhowr jiho ka weerareen saldhigyada maleeshiyaadka dowladda.
Ciidamada Al Shabaab ayaa isku gedaamay xaafadaha magaalada iyagoona baaritaanno ka sameeyay saldhigyadii laga eryay maleeshiyaadka dowladda oo markii dambe ubaxsaday dhanka saldhigga ciidamada AMISOM ee tuulada Buula Sheekh.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in dagaal muddo saacad ah socday kadib ay xoogaga Al Shabaab usuurtagashay in ay si buuxda ula wareegaan xaafadaha ay ka koobantahay degmada Qoryooleey balse saaka markii uu waagu baryay ayay ciidamada mujaahidiinta dib uga gurteen magaalada.
Warar hordhac ah waxay sheegayaan in ciidamo farabadan oo katirsan DF-ka lagu dilay dagaalkii xalay oo ahaa mid aad u xooggan, taliyaha Ciidamada dowladda ee Qoryooleey ayaa warbaahinta u xaqiijiyay weeraro culus ay kala kulmeen Al Shabaab balse wuxuu ku andacooday in ay iska difaaceen oo aan magaalada laga qabsan.
Muddo sanad ah ayay Al Shabaab weeraro aan kala joogsi laheyn ku hayaan degmada Qoryooleey oo lafilayo in ay noqoto meesha ugu horraysa ee ciidamada AMISOM ay isaga bixi doonaan marka lagaaro sanadda 2020-ka xilligaas oo la sheegay in ciidamada shisheeye ay dalka ka huleeli doonaan.